Anjerimanontolo : Mikorontana ny fampianarana ambony -
AccueilSongandinaAnjerimanontolo : Mikorontana ny fampianarana ambony
Anjerimanontolo : Mikorontana ny fampianarana ambony
13/01/2018 admintriatra Songandina 0
Saika ho isan-kerinandro izao dia andrenesana hetsika manaitaitra ny tompon’andraiki-panjakana foana eny amin’ny tontolon’ny Fampianarana ambony eny. Sanatriavin’ny vava , sahala amin’ny hoe tsy misy tompon’andraikitra eny. Raha tsy manambana hitokona noho ny fahataran’ny famoahana vatsim-pianarana ny mpianatra eny, dia ny avy amin’ny mpampianatra mpikaroka indray no manohy ny fitakiana, tahaka ny zava-nitranga omaly. Fanontaniana mahitsy tsy miolankolana no mipetraka : Tsy mahafehy ny fitantanana ny Fampianarana ambony ve ny minisitra Rasoazananera Marie Monique, izay minisitra mpiahy an’izany fampianarana ambaratonga ambony izany ?
Vao tsy ela akory izay no nisian’ny fampahatsiahivana mikasika ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny minisiteran’ny Asa Vaventy nandritry ny filankevitry ny Governemanta. Nilaza io fampahatsiahivana io fa tokony hijery vahaolana haingana amin’ireo olana mifanandrify azy avy ireo minisitera voatanisa etsy ambony ireo. Ny an’ny minisiteran’ny Asa vaventy, dia efa hita ny valin-kafatra nataony tamin’ny alalan’ny asa maika izay noraisiny an-tanana avy hatrany, fa ity minisiteran’ny Fampianarana ambony ity no toa milalao afo sy midororo.
Raha efa eo am-pelatananao ny famaliana ny fitakian’ny Seces maninona no tsy raisina avy hatrany ny fepetra mifanandrify amin’izany. Dia aza andrasana ela ihany koa ny famoahana ny vatsim-pianarana ho an’ny mpianatra ka andrasana hanimba zavatra sy hitora-bato vao ho taitra.
Ny fiandohan’ity herinandro ity moa dia nampaneno lakolosy mihitsy ny depiote mpiaro ny fitondrana, fa misy amin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta no tsy mahavita ny asany, ka lasa enta-mavesatra ho an’ny Filoham-pirenena sy ny praiminisitra.
Androany sabotsy faha-17 novambra no hamoaka ny voka-pifidianana fihodinana voalohany ny CENI. Ny filoha lefitry ny CENI, Thierry Rakotonarivo rahateo efa nanambara fa hivoaka mialohan’ny alahady 18 Novambra ny voka-pifidianana ofisialy, ary efa tsindrin-daona handre ...Tohiny
Nifety ny Malagasy : Feno avokoa ny tranombarotra rehetra
Bileta laharana faharoa : Ahitana ny fahadiavan’ilay kandida
Hery Rajaonarimampianina – CSM : Tokony ho fieren’ny malemy ny fitsarana